Mamorona kaonty miaraka amin'ny Adobe Premiere amin'ny tetikasanao | Famoronana an-tserasera
Paul gondar | | Fitaovana famolavolana, Tutorials
Mamorona crédit amin'ny Adobe Premiere ho an'ny tetikasanao ara-panoratan-tsaina dia ilaina amin'ny mpanonta video izany. Ny lohatenin'ny trosa dia singa iray tena ilaina amin'ny tetikasa audiovisual rehetra satria mampiseho antsika ny ekipa rehetra ao ambadiky ny tetikasa. Manomboka amin'ny crédit tsotra ka hatramin'ny sarotra kokoa, ny lohatenin'ny trosa dia nivoatra rehefa nandeha ny fotoana, afaka nanambatra teknika marobe, nahatratra valiny tena mamorona. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianarantsika mamorona haingana ny lohatenin'ny trosa mahatratra ny valiny mitovy amin'ny ampiasain'izy ireo amin'ny sarimihetsika marobe amin'ny sinema.
Adobe Premiere dia mahery programa fanovana izay mamela antsika hanao zavatra tsy tambo isaina rehefa manitsy horonan-tsary, amin'ny fomba haingana sy haingana, afaka minitra vitsy dia ho afaka hamorona mari-pahaizana matihanina. Mianara mifehy bebe kokoa an'ity programa fanovana horonantsary ity izay manome valiny mahafinaritra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hianarantsika ny fomba mamorona lohateny sasany crédit mihetsika (riandrano) tsy mampiasa afa-tsy typography.
Ny zavatra voalohany ilaintsika dia ny fananana ny tanisao miaraka amin'ny angona rehetra momba ny trosa, raha vantany vao vonona ity angona ity dia afaka manomboka miasa isika Premiere.
Manokatra ny programa izahay miaraka amin'ny fisie audiovisual efa vonona ary mamorona loko afara matte. Ity ampahany ity dia somary marobe miankina amin'ny filan'ny olona tsirairay, azontsika ampiasaina horonantsary ambadika na asio loko fisaka. Imbetsaka ny horonan-tsary kely misy tifitra diso no apetraka amin'ny lafiny iray raha mandalo amin'ny lafiny iray kosa ny loka.
. Aorian'ny famoronana ny loko matte dia ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia mamorona lohateny scroll default, noho izany dia mandeha eo amin'ny lohateny ambony lohateny / lohateny vaovao / horonana tsy misy fampiasa. Ny tonian-dahatsoratry ny Premiere Mitovy amin'ny tonian-dahatsoratry ny Adobe izany, azontsika atao ny manova ny endritsoratra, ny habeny, ny lokony, ny fomba ... sns Izahay dia mametaka ny masontsivana typografika araka izay itiavantsika azy.
Vantany vao vonona ny lahatsoratra, ny zavatra manaraka hatao dia ny manome hetsika ny lahatsoratra, misafidy safidy aminay izahay famindran-toerana ao anatin'ny menio fanovana lahatsoratra. Ao amin'ity boaty ity dia tsy maintsy asiantsika marika ny safidy famindrana toerana mba ahafahan'ny lahatsoratra mihetsika, tsy maintsy asiantsika marika koa ny safidy manomboka amin'ny efijery. Manana sanda hafa azo ovaina isika mba hampandeha tsara ny sary sy ny vokatra hafa, azontsika atao ny manandrana ireo safidy ireo raha toa ka mahasoa amin'ny zavatra tadiavintsika izy ireo.
Araka ny hevitry ny faharetan'ny fotoana ny lohatenin-dahatsorinay eo amin'ny fizotry ny fotoana, ny nahazoan-dalana Ho lava na lavalava kokoa izy ireo ary handeha amin'ny hafainganam-pandeha avo na ambany kokoa. Raha maharitra kokoa ny trosa dia hihena ny hafainganam-pandehan'izy ireo, raha maharitra kely kokoa ny fotoana dia ho avo kokoa ny hafainganan'izy ireo.
Efa ananantsika ny lohatenin'ny trosa ho an'ny karazana tetikasa audiovisual. Mora sy haingana dia haingana ny rafitra, ny sisa tsy maintsy ataontsika ankehitriny dia ny fanazaran-tena ary mamorona mba hamoronana fomba isan-karazany amin'ny fampiasana ity rafitra ity ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Mamorona mari-pankasitrahana amin'ny Adobe Premiere amin'ny tetikasanao audiovisual